डडेल्धुरामा कांग्रेस ‘तीन फ्याक’ : को हुन् सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका भट्ट ? - Unity Khabar
डडेल्धुरामा कांग्रेस ‘तीन फ्याक’ : को हुन् सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका भट्ट ?
✍️ शेर भण्डारी	 प्रकाशित मिति : ४ श्रावण २०७८, सोमबार १२:४५
डडेल्धुरा : नेपाली काँग्रेसमा केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म १४ औं महाधिवेशनको रौनक बढेको छ। केन्द्रमा सभापतिका आकांक्षीले दाबी प्रस्तुत गरिराख्दा जिल्ला सभापतिका दाबेदारको पनि दौडधुप सुरु भएको छ।
काँग्रेसमा अब वडा तहका अधिवेशनहरू नजिक आइसकेको छ। १२ साउनदेखि वडा तहको अधिवेशन सुरु हुनेछ। त्यसपछि १६ साउनमा पालिका, २० साउनमा प्रदेश सभा, क्षेत्र र २३ साउनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं जिल्लाको अधिवेशन हुनेछ।
त्यस्तै, एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रहरू भएका जिल्लाको अधिवेशन २६ साउनमा हुनेछ भने भदौ १ र २ गते सातै प्रदेशको अधिवेशन हुनेछ। त्यसपछि भदौ १६–१९ गते काठमाडौंमा १४ औं महाधिवेशन हुने काँग्रेसको कार्यतालिका छ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुरामा पनि पार्टी सभापतिको लागि होडबाजि चलेको छ। जिल्लामा देउवा बाहेक कांग्रेसको रामचन्द्र पौडेलको गुट भने छैन। देउवा गुटमै दुई उपगुट छन्।
जसमा एउटा गुटलाई आरजु देउवाको समर्थन छ। जिल्ला सभापति कर्णबहादुर मल्ल र पार्टीका पूर्व सभापति रघुवर भट्टका अलग उपगुट हुन्। रघुवर प्रधानमन्त्री देउवाकी पत्नी आरजु राणा देउवाको नजिक मानिन्छन् भने सभापति कर्णबहादुर खुमबहादुर खड्काको निकट मानिन्थे।
यसका बाबजुत फेरि काँग्रेस तीन ‘फ्याक’ भएको छ। दुई गुट रहेको कांग्रेस डडेल्धुरामा ‘नेपाली कांग्रेस सुदृढीकरण अभियान’ को नाम दिएर थप एक समूहको उदय भइसकेको छ।
जिल्लामा सभापतीको आकांक्षी धेरैं हुँदाहुँदै पार्टी सभापति देउवाले निवासमै बोलाएर सर्वसम्मतबाट पार्टी सभापतिका लागि परशुराम नगरपालिकाका मेयर भीमबहादुर साउदको नाम अगाडि सारेपछि काँग्रेसमा झनै आगो दन्किएको छ।
वडा तहका कार्यकर्तासँग छलफल गरेर नेतृत्वका लागि उम्मेद्वार चुन्नुपर्नेमा देउवाले एकलौटी हस्तक्षेप गरेको भन्दै यहाँका कतिपय नेता कार्यकर्ता आक्रोशित छन्। यसअघि जिल्ला सभापतिमा देउवा पक्षबाट मेयर साउँदसहित पूर्वसभापति रघुवर भट्ट, प्रदेश सांसद गोविन्द बोहोरा र गन्यापधुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवलबहादुर मल्ल आकांक्षी रहेका थिए।
तर, देउवा निवास बूढानीलकण्ठ पुगेका डडेल्धुराका नेताहरूसँगको छलफलमा देउवा परशुरामका मेयर साउदको पक्षमा उभिएका थिए। देउवा साउदको पक्षमा उभिएसँगै भट्ट र बोहरा ‘व्याक’ भएका छन् भने साउदले शुक्रबार काँग्रेस जिल्ला सभापतिको उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन्।
डडेल्धुरामा जन्मिएको तेस्रो धारबाट सभापतिमै हरिप्रसाद भट्टले उम्मेदवारी दिने भएका छन्। भट्ट पेसाले अधिवक्ता समेत हुन्।
आकांक्षी धेरै भएपनि सभापतिमा परशुराम नगरपालिकाका मेयर भिमबहादुर साउँद, वर्तमान उपसभापती करुणाकर भट्ट र अधिवक्ता हरिप्रसाद भट्टबीच तीव्र कडा प्रतिष्पर्धा हुने आकलन गरिएको छ।
मेयर साउँदलाई सभापति देउवाको समर्थन छ भने वर्तमान उपसभापती भट्टलाई कर्ण मल्लको समर्थन रहेको छ। अधिवक्ता भट्टलाई पनि जिल्लास्थित क्रियासिल काँग्रेस नेता कार्यकर्ताको समर्थन रहेको छ।
को हुन् तेस्रो धारबाट सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका भट्ट ?
डडेल्धुरामा जन्मिएको तेस्रो धारको नेतृत्व तहमा रहेका हरिप्रसाद भट्ट पेशाले अधिवक्ता हुन्। २०३७ सालको जनमत संग्रहबाटै उनको नेपाली काँग्रेस तिर झुकाव थियो।
जनमत संग्रहको समयमा बहुदल पक्षका राम्रो पोष्टर देखेर पोष्टरहरू भित्तामा चिप्काएका दिन अझै उनको मानसपटलमा जिवित छ। ती पोष्टर चिप्काउँदा उनी ११ वर्षका थिए। र, सोही समयमा उनलाई नेता भनेर बोलाइन्थ्यो।
२०४७ सालमा भट्ट बैतडीको पाटन क्याम्पसमा आई.एल पढ्दा नेविसंघ क्याम्पस इकाईको अध्यक्ष भए। उनले प्रजतन्त्रको लागि कठोर संघर्षसमेत गरे। सुदूरपश्चिममा सर्वाधिक लोकप्रिय नेता २०४७ सालमा पाटन एअरपोर्टमा आउँदा उनले स्वागत भाषण गरेका थिए।
स्वागत भाषण गरिसके पश्चात राती विज्ञान परियोजनाको घरमा बोलाई देउवाले उनको तारिफ गरे। ‘राम्रो भाषण गर्ने रहेछौं। अब तिमीले मसँग डडेल्धुरा भरि घुम्नु पर्छ। तिमी राम्रो नेता बन्छौं। म संक्षण गर्छु,’ देउवाले भट्टलाई भने।
देशकै लोकपृय नेताले आफ्नो बारेमा यति धेरै कुरा भनेपछि एउटा वकिल वा न्यायाधिशको भविष्यको योजना बनाएको उनको युवा मस्तिष्क उत्साह र हौसलाले भरियो। त्यसपछि भट्ट राजनीतिमा होमिए।
उनी २०५३ मा क्षेत्रिय प्रतिनिधि, २०५७ मा अमरगढी नगरसभापति, ३ पटक २०६२, ०६७ र ७२ मा लोकप्रिय मत ल्याएर महाधिवेशन महासिमितमा विजयी भएँ। साथीहरूले जिम्मेवारी दिइसकेपछि देउवा केन्द्रीय सभापतिका उम्मेदवार भएपछि उनी २०६७ र २०७२ मा निर्वाचमा प्रतिनिधि (एजेन्ट) भए।
२०७२ मा निर्वाचन समाप्त भएपछि लगत्तै काठमाण्डौमा आएको हावाहुरीले निर्वाचन क्षेत्रका धेरै जसो घरका टिनका छाना उडाउँदै गर्दा भट्टले एक हजार लिटरको प्लास्टिकको ड्रममा आँगलो हाले। अंगालो हाल्नुको कारण थियो कसैले मतपत्र दायाँबायाँ गर्छ कि भन्ने।
सोही समयमा एकजना किशोरसिंह राठौर भन्नेले तिम्रो जीवनभन्दा शेरबहादुर देउवाको सभापति विजय ठूलो हुँदैन भाग नत्र मर्छौं भन्दा उनी ज्यान दिन तयार भए तर, आफ्नो कर्तव्यबाट पछि हटेनन्।
उनी २०४७ सालमा देउवाले तिमीलाई म नेता बनाउँछु भनेको कर्तव्य पूरा गरेकोमा गौरव महसुस गर्दछन्। भट्टले २०६४ र २०७० मा देउवाले प्रतिनिधि सभामा डडेल्धुराबाट उम्मेदवारी दिँदा उनको निर्वाचन प्रतिनिधि भएर समेत काम गरिसकेका छन्।
उनले १७ चैत २०६४ मा माओवादीबाट बगरपाटामा निर्घात कुटाई समेत खाएँ। डडेल्धुरा काँग्रेसमा सिध्याउनै पर्ने मान्छे भनी मरणासन्न अवस्थामा पुग्दा होस वा जुनसुकै अवस्थामा होस् उनको निष्ठा र आस्था कहिल्यै डग मगाएन्।
गुटको अन्त्य गर्न उम्मेदवारी : भट्ट
डडेल्धुरा काँग्रेसजनहरूको साथ सहयोग प्राप्त हुने उच्च विश्वास र भरोसाका साथ आफूले सभापतिमा उम्मेदवारी दिएको उनको भनाइ छ।
जिल्लामा रहेका दुई वटै गुटको अन्त्य गर्न ‘नेपाली कांग्रेस सुदृढीकरण अभियान’ थालेका उनीसँग आफ्नै किमिमका कार्यकर्ताको सहयोग छ। सोही कारण आफू सभापतिको दावेदार बनेको भट्ट बताउँछन्।
नेपाली काँग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि एवं अभिवक्ता भट्टले जिल्लामा रहेको पार्टीको गुटलाई एकताका साथै आगामी हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहमा नेपाली काँग्रेसलाई विजयी गराउनका लागि उम्मेदवारी दिएको बताए।
१० श्रावण २०७८, आईतवार १२:५८